Free Thinker: လုပ်ငန်းခွင်အန္တရာယ်ကင်းရေးအရာရှိ (၂)
(၃) Safety Officer တစ်ဦး၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ
စင်ကာပူတွင် လုပ်ငန်းခွင်အန္တရာယ်ကင်းရေးအရာရှိများ ခန့်ထားဆောင်ရွက်ခြင်းကို ဥပဒေဖြင့် ပြဋ္ဌာန်းထားပါသည်။ ဥပဒေမှာ Workplace Safety and Health Act (Workplace Safety and Health Officers) Regulations ဖြစ်ပြီး ထိုဥပဒေတွင် Safety Officer တစ်ဦး၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ဖော်ပြထား၏။
ထိုဥပဒေအရ Safety Officer တစ်ဦးဖြစ်ရန် သတ်မှတ်ထားသော သင်တန်း (WSH level C) တက်ရောက်အောင်မြင်ပြီး သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ၌ လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ အနည်းဆုံး (၂) နှစ်ရှိရမည်။ ဤတွင်ဖော်ပြထားသည့် လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ ဆိုသည်မှာ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း၌ Safety Officer လုပ်လိုပါက ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများ၌ လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ (၂) နှစ်ရှိရမည်ဟု ဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်။ ဖော်ပြပါထိုအချက်များနှင့် မကိုက်ညီစေကာမူ သူတစ်ဦးတစ်ယောက်သည် Safety Officer ဖြစ်ရန် လုံလောက်သော အရည်အချင်းရှိသည်ဟု ကော်မရှင်နာမင်းကြီးက သတ်မှတ်လျှင် Safety Officer ဖြစ်ခွင့်ရှိပါသည်။
ထိုဥပဒေ၌ပင် Safety Officer များသည် သူတို့နှင့်သက်ဆိုင်သော သင်တန်းများကို တက်ရမည်။ မတက်လျှင် ကိုင်ဆောင်ထားသည့် Safety Officer လိုင်စင်ကို ရုပ်သိမ်းနိုင်သည် ဟု ဖော်ပြထားရာ ဤသည်မှာ Safety Officer များ၏ အရည် အသွေးကို မြှင့်တင်ရန် တွန်းအားပေးထားသည့် အချက်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
ဥပဒေ၌ ဖော်ပြထားသော လုပ်ငန်းခွင်အန္တရာယ်ကင်းရေး အရာရှိတစ်ဦး၏ အဓိကတာဝန်များမှာ အောက်ပါတို့ဖြစ်၏။
၁။ မိမိလုပ်ငန်းခွင်အတွင်းရှိ ထင်သာမြင်သာရှိသော အန္တရာယ်များကို ဖော်ထုတ်ရမည်။ အကဲဖြတ်ရမည်။ ထို့နောက် အလုပ်ရှင်သို့ သတင်းပို့ရမည်။
၂။ ထို့နောက် ထိုအန္တရာယ်များကို ဖြစ်နိုင်သမျှသော လက်တွေ့ကျသည့်နည်းအားလုံးသုံးလျက် ဖယ်ရှားပစ်ရမည်။
၃။ အကယ်၍ ထိုအန္တရာယ်များကို မဖယ်ရှားနိုင်ဆိုလျှင် အခြားသော နည်းလမ်းများသုံး၍ အန္တရာယ်အနည်းဆုံးဖြစ်အောင် လျှော့ချရမည်။ ထိုနည်းများတွင် အင်ဂျင်နီယာနည်းဖြင့် ထိန်းချုပ်ခြင်း၊ အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းဆိုင်ရာ ထိန်းချုပ်ခြင်း နှင့် တစ်ကိုယ်ရေကာကွယ်ရေးပစ္စည်းများ သုံးစွဲစေခြင်းတို့ပါသည်။
၄။ အလုပ်မှန်သမျှ မည်သည့်အလုပ်မဆို အန္တရာယ်ကင်းစွာလုပ်ကိုင်ရမည့် အစီအစဉ်ရေးဆွဲထားရမည်။ ထိုနည်းစဉ်များအတိုင်း အလုပ်သမားများ လိုက်နာလုပ်ဆောင်ကြောင်း သေချာစေရမည်။
အခြား တာဝန်ဝတ္တရားများမှာ အထက်ဖော်ပြပါ အဓိကတာဝန်များကို ကူညီပံ့ပိုးပေးခြင်းမျှဖြစ်၏။
ပထမဦးဆုံးအနေနှင့် Safety Officer တစ်ဦးသည် ပြဋ္ဌာန်းထားသော ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ၊ စည်းမျဉ်း စည်းကမ်း၊ စံနှုန်းများကို သေသေချာချာ နားလည်သဘောပေါက်နေရန် အရေးကြီး၏။ သို့မှသာ မိမိလုပ်ငန်းခွင်ကို ဥပဒေနှင့်အညီ ထိန်းထားနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
ဖော်ဆောင်နေသည့် အန္တရာယ်ကင်းရေးအစီအမံများ၊ တပ်ဆင်ထားသည့် အန္တရာယ်ကာကွယ်ရေး အကာအရံများသည် ချမှတ်ထားသည့် ဥပဒေစည်းမျဉ်း၊ စံများနှင့် ကိုက်ညီမညီ သိနိုင်ရန် Safety Officer သည် ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ၊ စံနှုန်းများက သတ်မှတ်ပေးထားသည့် အတိုင်းအတာ၊ စံများကို သိနေမှ ဖြစ်ပေမည်။
စင်ကာပူမှ လုပ်ငန်းခွင်အန္တရာယ်ကင်းရေးနှင့် ပတ်သက်သည့် နည်းဥပဒေအချို့မှာ အောက်ပါတို့ ဖြစ်၏။
1. ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများအတွက် - WSH (Construction) Regulations
2. ကတုတ်ကျင်း၊ လိုဏ်များအတွင်း အလုပ်လုပ်ခြင်းအတွက် - WSH (Confined Spaces) Regulations
3. ရှေးဦးသူနာပြုစုခြင်းအတွက် - WSH (First-Aid) Regulations
4. အထွေထွေပံ့ပိုးမှုများအတွက် - WSH (General Provisions) Regulations
5. မတော်တဆမှု သတင်းပို့ခြင်းအတွက် - WSH (Incident Reporting) Regulations
6. ဆူညံသံသည့် အလုပ်များအတွက် - WSH (Noise) Regulations
7. ဝန်ချီစက်မောင်းခြင်းအတွက် - WSH (Operation of Cranes) Regulations
8. အန္တရာယ်များစီမံခန့်ခွဲမှုအတွက် - WSH (Risk Management) Regulations
9. အန္တရာယ်ကင်းရေးစီမံချက်အတွက် - WSH (Safety and Health Management System and Auditing) Regulations
10. ငြမ်းစင်များအတွက် - WSH (Scaffolds) Regulations
11. အမြင့်တွင်အလုပ်လုပ်ခြင်းအတွက် - WSH (Work at Heights) Regulations
12. အန္တရာယ်ကင်းရေးကော်မတီအတွက် - WSH (Workplace Safety and Health Committees) Regulations
13. အန္တရာယ်ကင်းရေးအရာရှိများအတွက် - WSH (Workplace Safety and Health Officers) Regulations
14. ဥပဒေနှင့် အကျုံးဝင်သည့်လုပ်ငန်းများအတွက် - WSH (Workplaces Subject to Act) Order
စံနှုန်းများ (Singapore Standards and Code of Practices) များမှာ အတော်များပါသည်။ အရေးကြီးသော စံနှုန်းများကို ဖော်ပြရလျှင် အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်၏။
1. Code of Practice for Working Safely at Heights
2. Code of Practice on WSH Risk Management
3. Code of Practice on Safe Lifting Operations in the Workplaces
4. SS 280: Specification for Metal scaffoldings
5. SS 506: Occupational safety and health (OSH) management 2009 system
6. SS 510: Code of Practice for Safety in welding and cutting
7. SS 536: Code of Practice for The safe use of mobile cranes
8. SS 537: Code of Practice for Safe use of machinery
9. SS 557: Code of Practice for Demolition
10. SS 559: Code of Practice for Safe use of tower cranes
11. SS 568: Code of Practice for Confined spaces
12. SS 580: Code of Practice for Formwork
13. SS 598: Code of Practice for Suspended scaffolds
14. CP 14: Code of Practice for Scaffolds
15. CP 5: Code of Practice for Electrical installations
16. CP 79: Code of Practice for Safety management system for construction worksites
17. CP 88: Code of Practice for Temporary electrical installations
ထိုဥပဒေနှင့်စံနှုန်းများတွင် Safety Officer တစ်ဦးအနေနှင့် မသိမဖြစ်သိရမည့် အချက်အလက်များ ပါသည်။ ဥပမာ - လက်ရမ်းတပ်ဆင်ရမည့် စံနှုန်း၊ ငြမ်းဆင်ရာတွင် လိုအပ်ချက်၊ ဖောင်ဝပ်ဆင်ရာ၌ ရှိရမည့် စံနှုန်းများ၊ လုပ်ငန်းစစ်လုပ်ရန် လိုအပ်ချက်၊ ဓာတ်ကြိုးများ တပ်ဆင်ခြင်းအတွက် လိုအပ်ချက်၊ မြေကျင်းတူးခြင်းလုပ်ငန်းအတွက် လိုအပ်ချက် စသည်။
Safety Officer တစ်ဦးလုပ်ရမည့်လုပ်ငန်းများကို တစ်ချက်ချင်း အသေးစိတ်ရှင်းပြရန် မလွယ်ကူပါ။ သို့တိုင် ယေဘူယျ လုပ်ဆောင်ရမည့်တာဝန်များကိုမူ အောက်ပါအတိုင်း ဖော်ပြနိုင်ပါသည်။
၃၊ ၁။ ဥပဒေအရ သိမ်းဆည်းထားရမည့် စာရွက်စာတမ်းအားလုံးကို စနစ်တကျ သိမ်းဆည်းခြင်း
§ လုပ်ငန်းလိုင်စင်များ (Factory license၊ BCA မှ ထုတ်ပေးသည့် ဆောက်လုပ်ခွင့်လိုင်စင်၊ မီးအသုံးပြုမှုလိုင်စင် စသည်)
§ အန္တရာယ်ကင်းရေးမူဝါဒ နှင့် ထိုမူဝါဒကို ရှင်းလင်းပြောပြသည့်၊ ဖြန့်ဝေထားသည့် မှတ်တမ်းများ
§ အန္တရာယ်ကင်းစွာ လုပ်ကိုင်ရေးအစီအစဉ် (Safe Work Procedure) မှတ်တမ်းများ
§ အန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲမှု (Risk Assessment) မှတ်တမ်းများ
§ အန္တရာယ်များသည့်ပစ္စည်းများ၏ သတင်းအချက်အလက် (Material Safety Data Sheet) နှင့် ထိုစာရွက်စာတမ်းအား အသုံးပြုသူအလုပ်သမားသို့ ရှင်းပြသည့် မှတ်တမ်းများ
§ ဝန်ထမ်းများ၏ သင်တန်းမှတ်တမ်းများ (Training Records)(ဥပမာ - ပရောဂျက်မန်နေဂျာအတွက် Safety Course for Project Managers, Risk Management Course စသည်)
§ အလုပ်ခန့်စာများ (Appointment letters)
§ နေ့စဉ် Toolbox Meeting မှတ်တမ်းများ၊ အပတ်စဉ်၊ လစဉ် စည်းဝေးပွဲ မှတ်တမ်းများ
§ လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း ဝင်ရောက်လာသူအားလုံးကို သင်တန်းပေးရသည့် Safety Induction Course မှတ်တမ်းများ
§ စက်ကိရိယာပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု မှတ်တမ်းများ (Maintenance Record)
§ မတော်တဆထိခိုက်မှု မှတ်တမ်းများ (Incident Reports)
§ လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်သူနှင့် ၎င်းတို့၏ လက်မှတ်/လိုင်စင်မှတ်တမ်းများ (ဥပမာ - ရှေးဦးသူနာပြုသူ၊ ကရိန်းမောင်းသူ၊ ဝန်ချီလုပ်ငန်း ကြီးကြပ်သူ၊အချက်ပြသူ၊ ကြိုးချည်သူ၊ ငြမ်းဆင်သူ၊ ငြမ်းဆင်လုပ်ငန်းကြီးကြပ်သူ၊ ဖောက်ကလစ်မောင်းသူ၊ လော်ရီကားမောင်းသူ၊ ဖောင်ဝပ်လုပ်ငန်း ကြီးကြပ်သူ၊ လျှပ်စစ်သွယ်တန်းသူ၊ စက်ကိရိယာများ ပြင်ဆင်သူ၊ မြေတူးစက်မောင်းသူ၊ ပိုင်ရိုက်စက်မောင်းသူ စသည်)
§ အန္တရာယ်ကင်းရေးဆိုင်ရာ သင်တန်းဆင်းလက်မှတ်များ (ဥပမာ - Safety Supervisor လက်မှတ်၊ Safety Officer လက်မှတ်နှင့် လိုင်စင်၊ အလုပ်သမားများအတွက် CSOC လက်မှတ်၊ ကြီးကြပ်ရေမှူးများအတွက် BCSS လက်မှတ်၊ အမြင့်တွင်လုပ်သည့် လုပ်ငန်း ကြီးကြပ်သူလက်မှတ်၊ ကွန်ဖိုင်းစပေ့စ်အတွင်း လုပ်ရသည့်လုပ်ငန်းများ ကြီးကြပ်သူလက်မှတ် စသည်)
§ ပစ္စည်းများ စစ်ဆေးမှုမှတ်တမ်းများ (ဥပမာ - ဝန်ချီစက်များ စစ်ဆေးမှုမှတ်တမ်း၊ ဝန်ချီကိရိယာများ စစ်ဆေးမှုမှတ်တမ်း၊ လေအိုးများ စစ်ဆေးမှုမှတ်တမ်း၊ Scissor lift, boom lift, gondola, mast climber စသည်တို့၏ စစ်ဆေးမှုမှတ်တမ်း စသည်)
§ စစ်ဆေးမှုမှတ်တမ်းများ (ဥပမာ - ငြမ်းစင်စစ်ဆေးမှုမှတ်တမ်း၊ ဖောင်ဝပ်စစ်ဆေးမှုမှတ်တမ်း၊ တစ်ကိုယ်ရည် ကာကွယ်ရေး ပစ္စည်းများ စစ်ဆေးမှုမှတ်တမ်း၊ လှေခါးစစ်ဆေးမှုမှတ်တမ်း၊ မီးသတ်ဘူးစစ်ဆေးမှုမှတ်တမ်း၊ လျှပ်စစ်သုံးစက်ကိရိယာများ စစ်ဆေးမှုမှတ်တမ်း စသည်)
§ အလုပ်သမားအားလုံး၏ Workpermit, S Pass, Employment Pass စသည်
§ လုပ်ငန်းခွင်အန္တရာယ်ကင်းရေး စစ်ဆေးမှုမှတ်တမ်းများ (နေ့စဉ်၊ အပတ်စဉ်၊ လစဉ် စသည်)
§ အရေးပေါ်စီမံချက်မှတ်တမ်းများ (အရေးပေါ်စီမံချက်၊ ဇာတ်တိုက်လေ့ကျင့်ခြင်း စသည်)
§ လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း ပေးသည့်သင်တန်း မှတ်တမ်းများ (ဥပမာ - ဂွန်ဒိုလာ အသုံးပြုနည်း၊ လှေခါးအသုံးပြုနည်း၊ မီးသတ်ဘူး အသုံးပြုနည်း စသည်)
§ လုပ်ငန်းစစ်မှတ်တမ်းနှင့် အရေးယူဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းများ (Safety Audit and Follow Up Action Records)
§ လုပ်ငန်းခွင်အန္တရာယ်ကင်းရေး မြှင့်တင်သည့် လှုပ်ရှားမှုမှတ်တမ်းများ (Safety Promotion activities)
§ စည်းကမ်းဖောက်ဖျက်သဖြင့် အရေးယူသည့် မှတ်တမ်းများ
§ အာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် စာပေးစာယူ မှတ်တမ်းများ
၃၊ ၂။ Safety Induction course သင်တန်းပေးခြင်း
Safety Officer တစ်ဦးအနေနှင့် မိမိလုပ်ငန်းခွင်အတွင်းသို့ အသစ်ရောက်ရှိလာသည့် ဝန်ထမ်းအားလုံး (မန်နေဂျာ၊ အင်ဂျင်နီယာ၊ အလုပ်သမား စသည်) ကို အလုပ်မစမီ သိသင့်သိထိုက်သည့် အန္တရာယ်ကင်းရေးဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းများကို ရှင်းပြရပါမည်။
ဤအထဲတွင် မိမိတို့ ကုမ္ပဏီက ချမှတ်ကျင့်သုံးနေသည့် အန္တရာယ်ကင်းရေးဆိုင်ရာ မူဝါဒ၊ မိမိတို့ ကုမ္ပဏီ၏ ဤလုပ်ငန်းနှင့်ပတ်သက်၍ ချမှတ်ထားသော ယေဘူယျ အန္တရာယ်ကင်းရေးဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းများ၊ အန္တရာယ်ကင်းအောင် လုပ်ကိုင်ရမည့် အစီအစဉ်၊ ဖြစ်နိုင်သည့်အန္တရာယ်များနှင့် ကာကွယ်ရမည့် နည်းလမ်းများ၊ အရေးအပေါ်အခြေအနေတွင် တုံ့ပြန်နည်း၊ အန္တရာယ်မကင်းသည့်လှုပ်ရှားမှု (သို့) အခြေအနေတွေ့ပါက သတင်းပို့ပုံပို့နည်း၊ အရေးပေါ်ဆက်သွယ်ရမည့် ဖုံးနံပါတ် များ၊ အရေးပေါ်ထွက်ပေါက်၊ ထမင်းစားရန်နေရာ၊ နားနေရန်နေရာ၊ အိမ်သာ၊ ခြေလက်မျက်နှာ ဆေးကြောရန် နေရာ၊ သောက်ရေ ရနိုင်သည့်နေရာ၊ အနီးဆုံးဆေးခန်း၊ ဆေးရုံလိပ်စာနှင့် ဖုံးနံပါတ် စသည်တို့ ပါဝင်ပါသည်။
SIC သင်တန်းပေးသည်နှင့်တပြိုင်နက် ၎င်းတို့၏ workpass များ (Workpermit, S Pass, Employment Pass စသည်) ကို မိတ္တူကူးထားရမည်။ ထို့ပြင် သင်တန်းပေးသည်ကို နားလည်သဘောပေါက်ကြောင်းလည်း လက်မှတ်ထိုးကာ မှတ်တမ်းတင် ထားရမည်။ SIC လာသည့်အခါ တစ်ကိုယ်ရေကာကွယ်ရေးပစ္စည်းများပါ တစ်ပါတည်း ယူဆောင်လာခိုင်းရမည်။ ထိုပစ္စည်းများ ရှိကြောင်းလည်း မှတ်တမ်းတင်ထားရသည်။
SIC သင်တန်းပေးခြင်းသည် အရေးကြီး၏။ အပြင်မှလာသည့် လူစိမ်းများသည် မိမိလုပ်ငန်းခွင်အကြောင်း ဘာမှ မသိသေးသူများဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ဤလုပ်ငန်းခွင်၏ အနေအထား၊ လုပ်ငန်း သဘောသဘာဝ၊ ဖြစ်နိုင်သည့် အန္တရာယ်များ စသည်တို့ကို သေချာကျနစွာ ရှင်းပြရသည်။ အကယ်၍ အလုပ်သမားများသည် မိမိပြောဆိုသည့် ဘာသာစကားကို နားမလည်နိုင်သည် ဖြစ်အံ့။ ၎င်းတို့ဘာသာစကားကို ပြောတတ်သူ တစ်ဦးဦးအား ဘာသာပြန်ခိုင်းကာ ပြောဆိုပြရမည်။ သို့မဟုတ်ပါက အလုပ်သမားများအတွက် အလွန် အန္တရာယ် များလေသည်။
SIC သင်တန်းပေးရာတွင် အမြဲအလုပ်လုပ်နေသူများသာမက တစ်ခါတစ်ရံမှလာသူ ဧည့်သည်များ၊ စက်ပြင်သူများ အားလည်း ရှင်းလင်းပြသရန်လိုသည်။ အာဏာပိုင်အဖွဲ့မှ လာသည်ဆိုလျှင်ပင် ၎င်းတို့အား မိမိက SIC သင်တန်းပေးခြင်းမှာ မှားယွင်းသည့်လုပ်ရပ်မဟုတ်ပါ။ မိမိ၏တာဝန်တစ်ရပ်အနေနှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့် ရှိပါသည်။
(၃) Safety Officer တဈဦး၏ လုပျငနျးတာဝနျမြား
စငျကာပူတှငျ လုပျငနျးခှငျအန်တရာယျကငျးရေးအရာရှိမြား ခနျ့ထားဆောငျရှကျခွငျးကို ဥပဒဖွေငျ့ ပွဋ်ဌာနျးထားပါသညျ။ ဥပဒမှော Workplace Safety and Health Act (Workplace Safety and Health Officers) Regulations ဖွဈပွီး ထိုဥပဒတှေငျ Safety Officer တဈဦး၏ လုပျငနျးတာဝနျမြားကို ဖျောပွထား၏။
ထိုဥပဒအေရ Safety Officer တဈဦးဖွဈရနျ သတျမှတျထားသော သငျတနျး (WSH level C) တကျရောကျအောငျမွငျပွီး သကျဆိုငျရာလုပျငနျးမြား၌ လုပျငနျးအတှအေ့ကွုံ အနညျးဆုံး (၂) နှဈရှိရမညျ။ ဤတှငျဖျောပွထားသညျ့ လုပျငနျးအတှအေ့ကွုံ ဆိုသညျမှာ ဆောကျလုပျရေးလုပျငနျး၌ Safety Officer လုပျလိုပါက ဆောကျလုပျရေးလုပျငနျးမြား၌ လုပျငနျးအတှအေ့ကွုံ (၂) နှဈရှိရမညျဟု ဆိုလိုခွငျးဖွဈသညျ။ ဖျောပွပါထိုအခကျြမြားနှငျ့ မကိုကျညီစကောမူ သူတဈဦးတဈယောကျသညျ Safety Officer ဖွဈရနျ လုံလောကျသော အရညျအခငျြးရှိသညျဟု ကျောမရှငျနာမငျးကွီးက သတျမှတျလြှငျ Safety Officer ဖွဈခှငျ့ရှိပါသညျ။
ထိုဥပဒေ၌ပငျ Safety Officer မြားသညျ သူတို့နှငျ့သကျဆိုငျသော သငျတနျးမြားကို တကျရမညျ။ မတကျလြှငျ ကိုငျဆောငျထားသညျ့ Safety Officer လိုငျစငျကို ရုပျသိမျးနိုငျသညျ ဟု ဖျောပွထားရာ ဤသညျမှာ Safety Officer မြား၏ အရညျ အသှေးကို မွှငျ့တငျရနျ တှနျးအားပေးထားသညျ့ အခကျြတဈခုဖွဈပါသညျ။
ဥပဒေ၌ ဖျောပွထားသော လုပျငနျးခှငျအန်တရာယျကငျးရေး အရာရှိတဈဦး၏ အဓိကတာဝနျမြားမှာ အောကျပါတို့ဖွဈ၏။
၁။ မိမိလုပျငနျးခှငျအတှငျးရှိ ထငျသာမွငျသာရှိသော အန်တရာယျမြားကို ဖျောထုတျရမညျ။ အကဲဖွတျရမညျ။ ထို့နောကျ အလုပျရှငျသို့ သတငျးပို့ရမညျ။
၂။ ထို့နောကျ ထိုအန်တရာယျမြားကို ဖွဈနိုငျသမြှသော လကျတှကေ့သြညျ့နညျးအားလုံးသုံးလကျြ ဖယျရှားပဈရမညျ။
၃။ အကယျ၍ ထိုအန်တရာယျမြားကို မဖယျရှားနိုငျဆိုလြှငျ အခွားသော နညျးလမျးမြားသုံး၍ အန်တရာယျအနညျးဆုံးဖွဈအောငျ လြှော့ခရြမညျ။ ထိုနညျးမြားတှငျ အငျဂငျြနီယာနညျးဖွငျ့ ထိနျးခြုပျခွငျး၊ အုပျခြုပျရေးပိုငျးဆိုငျရာ ထိနျးခြုပျခွငျး နှငျ့ တဈကိုယျရကောကှယျရေးပစ်စညျးမြား သုံးစှဲစခွေငျးတို့ပါသညျ။
၄။ အလုပျမှနျသမြှ မညျသညျ့အလုပျမဆို အန်တရာယျကငျးစှာလုပျကိုငျရမညျ့ အစီအစဉျရေးဆှဲထားရမညျ။ ထိုနညျးစဉျမြားအတိုငျး အလုပျသမားမြား လိုကျနာလုပျဆောငျကွောငျး သခြောစရေမညျ။
အခွား တာဝနျဝတ်တရားမြားမှာ အထကျဖျောပွပါ အဓိကတာဝနျမြားကို ကူညီပံ့ပိုးပေးခွငျးမြှဖွဈ၏။
ပထမဦးဆုံးအနနှေငျ့ Safety Officer တဈဦးသညျ ပွဋ်ဌာနျးထားသော ဥပဒေ၊ နညျးဥပဒေ၊ စညျးမဉျြး စညျးကမျး၊ စံနှုနျးမြားကို သသေခြောခြာ နားလညျသဘောပေါကျနရေနျ အရေးကွီး၏။ သို့မှသာ မိမိလုပျငနျးခှငျကို ဥပဒနှေငျ့အညီ ထိနျးထားနိုငျမညျဖွဈပါသညျ။
ဖျောဆောငျနသေညျ့ အန်တရာယျကငျးရေးအစီအမံမြား၊ တပျဆငျထားသညျ့ အန်တရာယျကာကှယျရေး အကာအရံမြားသညျ ခမြှတျထားသညျ့ ဥပဒစေညျးမဉျြး၊ စံမြားနှငျ့ ကိုကျညီမညီ သိနိုငျရနျ Safety Officer သညျ ဥပဒေ၊ နညျးဥပဒေ၊ စံနှုနျးမြားက သတျမှတျပေးထားသညျ့ အတိုငျးအတာ၊ စံမြားကို သိနမှေ ဖွဈပမေညျ။
စငျကာပူမှ လုပျငနျးခှငျအန်တရာယျကငျးရေးနှငျ့ ပတျသကျသညျ့ နညျးဥပဒအေခြို့မှာ အောကျပါတို့ ဖွဈ၏။
1. ဆောကျလုပျရေးလုပျငနျးမြားအတှကျ - WSH (Construction) Regulations
2. ကတုတျကငျြး၊ လိုဏျမြားအတှငျး အလုပျလုပျခွငျးအတှကျ - WSH (Confined Spaces) Regulations
3. ရှေးဦးသူနာပွုစုခွငျးအတှကျ - WSH (First-Aid) Regulations
4. အထှထှေပေံ့ပိုးမှုမြားအတှကျ - WSH (General Provisions) Regulations
5. မတျောတဆမှု သတငျးပို့ခွငျးအတှကျ - WSH (Incident Reporting) Regulations
6. ဆူညံသံသညျ့ အလုပျမြားအတှကျ - WSH (Noise) Regulations
7. ဝနျခြီစကျမောငျးခွငျးအတှကျ - WSH (Operation of Cranes) Regulations
8. အန်တရာယျမြားစီမံခနျ့ခှဲမှုအတှကျ - WSH (Risk Management) Regulations
9. အန်တရာယျကငျးရေးစီမံခကျြအတှကျ - WSH (Safety and Health Management System and Auditing) Regulations
10. ငွမျးစငျမြားအတှကျ - WSH (Scaffolds) Regulations
11. အမွငျ့တှငျအလုပျလုပျခွငျးအတှကျ - WSH (Work at Heights) Regulations
12. အန်တရာယျကငျးရေးကျောမတီအတှကျ - WSH (Workplace Safety and Health Committees) Regulations
13. အန်တရာယျကငျးရေးအရာရှိမြားအတှကျ - WSH (Workplace Safety and Health Officers) Regulations
14. ဥပဒနှေငျ့ အကြုံးဝငျသညျ့လုပျငနျးမြားအတှကျ - WSH (Workplaces Subject to Act) Order
စံနှုနျးမြား (Singapore Standards and Code of Practices) မြားမှာ အတျောမြားပါသညျ။ အရေးကွီးသော စံနှုနျးမြားကို ဖျောပွရလြှငျ အောကျပါအတိုငျး ဖွဈ၏။
ထိုဥပဒနှေငျ့စံနှုနျးမြားတှငျ Safety Officer တဈဦးအနနှေငျ့ မသိမဖွဈသိရမညျ့ အခကျြအလကျမြား ပါသညျ။ ဥပမာ - လကျရမျးတပျဆငျရမညျ့ စံနှုနျး၊ ငွမျးဆငျရာတှငျ လိုအပျခကျြ၊ ဖောငျဝပျဆငျရာ၌ ရှိရမညျ့ စံနှုနျးမြား၊ လုပျငနျးစဈလုပျရနျ လိုအပျခကျြ၊ ဓာတျကွိုးမြား တပျဆငျခွငျးအတှကျ လိုအပျခကျြ၊ မွကေငျြးတူးခွငျးလုပျငနျးအတှကျ လိုအပျခကျြ စသညျ။
Safety Officer တဈဦးလုပျရမညျ့လုပျငနျးမြားကို တဈခကျြခငျြး အသေးစိတျရှငျးပွရနျ မလှယျကူပါ။ သို့တိုငျ ယဘေူယြ လုပျဆောငျရမညျ့တာဝနျမြားကိုမူ အောကျပါအတိုငျး ဖျောပွနိုငျပါသညျ။
၃၊ ၁။ ဥပဒအေရ သိမျးဆညျးထားရမညျ့ စာရှကျစာတမျးအားလုံးကို စနဈတကြ သိမျးဆညျးခွငျး
 လုပျငနျးလိုငျစငျမြား (Factory license၊ BCA မှ ထုတျပေးသညျ့ ဆောကျလုပျခှငျ့လိုငျစငျ၊ မီးအသုံးပွုမှုလိုငျစငျ စသညျ)
 အန်တရာယျကငျးရေးမူဝါဒ နှငျ့ ထိုမူဝါဒကို ရှငျးလငျးပွောပွသညျ့၊ ဖွနျ့ဝထေားသညျ့ မှတျတမျးမြား
 အန်တရာယျကငျးစှာ လုပျကိုငျရေးအစီအစဉျ (Safe Work Procedure) မှတျတမျးမြား
 အန်တရာယျစီမံခနျ့ခှဲမှု (Risk Assessment) မှတျတမျးမြား
 အန်တရာယျမြားသညျ့ပစ်စညျးမြား၏ သတငျးအခကျြအလကျ (Material Safety Data Sheet) နှငျ့ ထိုစာရှကျစာတမျးအား အသုံးပွုသူအလုပျသမားသို့ ရှငျးပွသညျ့ မှတျတမျးမြား
 ဝနျထမျးမြား၏ သငျတနျးမှတျတမျးမြား (Training Records)(ဥပမာ - ပရောဂကျြမနျနဂြောအတှကျ Safety Course for Project Managers, Risk Management Course စသညျ)
 အလုပျခနျ့စာမြား (Appointment letters)
 နစေ့ဉျ Toolbox Meeting မှတျတမျးမြား၊ အပတျစဉျ၊ လစဉျ စညျးဝေးပှဲ မှတျတမျးမြား
 လုပျငနျးခှငျအတှငျး ဝငျရောကျလာသူအားလုံးကို သငျတနျးပေးရသညျ့ Safety Induction Course မှတျတမျးမြား
 စကျကိရိယာပွုပွငျထိနျးသိမျးမှု မှတျတမျးမြား (Maintenance Record)
 မတျောတဆထိခိုကျမှု မှတျတမျးမြား (Incident Reports)
 လုပျငနျးကြှမျးကငျြသူနှငျ့ ၎င်းငျးတို့၏ လကျမှတျ/လိုငျစငျမှတျတမျးမြား (ဥပမာ - ရှေးဦးသူနာပွုသူ၊ ကရိနျးမောငျးသူ၊ ဝနျခြီလုပျငနျး ကွီးကွပျသူ၊အခကျြပွသူ၊ ကွိုးခညျြသူ၊ ငွမျးဆငျသူ၊ ငွမျးဆငျလုပျငနျးကွီးကွပျသူ၊ ဖောကျကလဈမောငျးသူ၊ လျောရီကားမောငျးသူ၊ ဖောငျဝပျလုပျငနျး ကွီးကွပျသူ၊ လြှပျစဈသှယျတနျးသူ၊ စကျကိရိယာမြား ပွငျဆငျသူ၊ မွတေူးစကျမောငျးသူ၊ ပိုငျရိုကျစကျမောငျးသူ စသညျ)
 အန်တရာယျကငျးရေးဆိုငျရာ သငျတနျးဆငျးလကျမှတျမြား (ဥပမာ - Safety Supervisor လကျမှတျ၊ Safety Officer လကျမှတျနှငျ့ လိုငျစငျ၊ အလုပျသမားမြားအတှကျ CSOC လကျမှတျ၊ ကွီးကွပျရမှေူးမြားအတှကျ BCSS လကျမှတျ၊ အမွငျ့တှငျလုပျသညျ့ လုပျငနျး ကွီးကွပျသူလကျမှတျ၊ ကှနျဖိုငျးစပစျေ့အတှငျး လုပျရသညျ့လုပျငနျးမြား ကွီးကွပျသူလကျမှတျ စသညျ)
 ပစ်စညျးမြား စဈဆေးမှုမှတျတမျးမြား (ဥပမာ - ဝနျခြီစကျမြား စဈဆေးမှုမှတျတမျး၊ ဝနျခြီကိရိယာမြား စဈဆေးမှုမှတျတမျး၊ လအေိုးမြား စဈဆေးမှုမှတျတမျး၊ Scissor lift, boom lift, gondola, mast climber စသညျတို့၏ စဈဆေးမှုမှတျတမျး စသညျ)
 စဈဆေးမှုမှတျတမျးမြား (ဥပမာ - ငွမျးစငျစဈဆေးမှုမှတျတမျး၊ ဖောငျဝပျစဈဆေးမှုမှတျတမျး၊ တဈကိုယျရညျ ကာကှယျရေး ပစ်စညျးမြား စဈဆေးမှုမှတျတမျး၊ လှခေါးစဈဆေးမှုမှတျတမျး၊ မီးသတျဘူးစဈဆေးမှုမှတျတမျး၊ လြှပျစဈသုံးစကျကိရိယာမြား စဈဆေးမှုမှတျတမျး စသညျ)
 အလုပျသမားအားလုံး၏ Workpermit, S Pass, Employment Pass စသညျ
 လုပျငနျးခှငျအန်တရာယျကငျးရေး စဈဆေးမှုမှတျတမျးမြား (နစေ့ဉျ၊ အပတျစဉျ၊ လစဉျ စသညျ)
 အရေးပျေါစီမံခကျြမှတျတမျးမြား (အရေးပျေါစီမံခကျြ၊ ဇာတျတိုကျလကေ့ငျြ့ခွငျး စသညျ)
 လုပျငနျးခှငျအတှငျး ပေးသညျ့သငျတနျး မှတျတမျးမြား (ဥပမာ - ဂှနျဒိုလာ အသုံးပွုနညျး၊ လှခေါးအသုံးပွုနညျး၊ မီးသတျဘူး အသုံးပွုနညျး စသညျ)
 လုပျငနျးစဈမှတျတမျးနှငျ့ အရေးယူဆောငျရှကျမှု မှတျတမျးမြား (Safety Audit and Follow Up Action Records)
 လုပျငနျးခှငျအန်တရာယျကငျးရေး မွှငျ့တငျသညျ့ လှုပျရှားမှုမှတျတမျးမြား (Safety Promotion activities)
 စညျးကမျးဖောကျဖကျြသဖွငျ့ အရေးယူသညျ့ မှတျတမျးမြား
 အာဏာပိုငျအဖှဲ့အစညျးမြားနှငျ့ စာပေးစာယူ မှတျတမျးမြား
၃၊ ၂။ Safety Induction course သငျတနျးပေးခွငျး
Safety Officer တဈဦးအနနှေငျ့ မိမိလုပျငနျးခှငျအတှငျးသို့ အသဈရောကျရှိလာသညျ့ ဝနျထမျးအားလုံး (မနျနဂြော၊ အငျဂငျြနီယာ၊ အလုပျသမား စသညျ) ကို အလုပျမစမီ သိသငျ့သိထိုကျသညျ့ အန်တရာယျကငျးရေးဆိုငျရာ စညျးမဉျြးမြားကို ရှငျးပွရပါမညျ။
ဤအထဲတှငျ မိမိတို့ ကုမ်ပဏီက ခမြှတျကငျြ့သုံးနသေညျ့ အန်တရာယျကငျးရေးဆိုငျရာ မူဝါဒ၊ မိမိတို့ ကုမ်ပဏီ၏ ဤလုပျငနျးနှငျ့ပတျသကျ၍ ခမြှတျထားသော ယဘေူယြ အန်တရာယျကငျးရေးဆိုငျရာ စညျးမဉျြးမြား၊ အန်တရာယျကငျးအောငျ လုပျကိုငျရမညျ့ အစီအစဉျ၊ ဖွဈနိုငျသညျ့အန်တရာယျမြားနှငျ့ ကာကှယျရမညျ့ နညျးလမျးမြား၊ အရေးအပျေါအခွအေနတှေငျ တုံ့ပွနျနညျး၊ အန်တရာယျမကငျးသညျ့လှုပျရှားမှု (သို့) အခွအေနတှေပေ့ါက သတငျးပို့ပုံပို့နညျး၊ အရေးပျေါဆကျသှယျရမညျ့ ဖုံးနံပါတျ မြား၊ အရေးပျေါထှကျပေါကျ၊ ထမငျးစားရနျနရော၊ နားနရေနျနရော၊ အိမျသာ၊ ခွလေကျမကျြနှာ ဆေးကွောရနျ နရော၊ သောကျရေ ရနိုငျသညျ့နရော၊ အနီးဆုံးဆေးခနျး၊ ဆေးရုံလိပျစာနှငျ့ ဖုံးနံပါတျ စသညျတို့ ပါဝငျပါသညျ။
SIC သငျတနျးပေးသညျနှငျ့တပွိုငျနကျ ၎င်းငျးတို့၏ workpass မြား (Workpermit, S Pass, Employment Pass စသညျ) ကို မိတ်တူကူးထားရမညျ။ ထို့ပွငျ သငျတနျးပေးသညျကို နားလညျသဘောပေါကျကွောငျးလညျး လကျမှတျထိုးကာ မှတျတမျးတငျ ထားရမညျ။ SIC လာသညျ့အခါ တဈကိုယျရကောကှယျရေးပစ်စညျးမြားပါ တဈပါတညျး ယူဆောငျလာခိုငျးရမညျ။ ထိုပစ်စညျးမြား ရှိကွောငျးလညျး မှတျတမျးတငျထားရသညျ။
SIC သငျတနျးပေးခွငျးသညျ အရေးကွီး၏။ အပွငျမှလာသညျ့ လူစိမျးမြားသညျ မိမိလုပျငနျးခှငျအကွောငျး ဘာမှ မသိသေးသူမြားဖွဈသညျ။ ထို့ကွောငျ့ ဤလုပျငနျးခှငျ၏ အနအေထား၊ လုပျငနျး သဘောသဘာဝ၊ ဖွဈနိုငျသညျ့ အန်တရာယျမြား စသညျတို့ကို သခြောကနြစှာ ရှငျးပွရသညျ။ အကယျ၍ အလုပျသမားမြားသညျ မိမိပွောဆိုသညျ့ ဘာသာစကားကို နားမလညျနိုငျသညျ ဖွဈအံ့။ ၎င်းငျးတို့ဘာသာစကားကို ပွောတတျသူ တဈဦးဦးအား ဘာသာပွနျခိုငျးကာ ပွောဆိုပွရမညျ။ သို့မဟုတျပါက အလုပျသမားမြားအတှကျ အလှနျ အန်တရာယျ မြားလသေညျ။
SIC သငျတနျးပေးရာတှငျ အမွဲအလုပျလုပျနသေူမြားသာမက တဈခါတဈရံမှလာသူ ဧညျ့သညျမြား၊ စကျပွငျသူမြား အားလညျး ရှငျးလငျးပွသရနျလိုသညျ။ အာဏာပိုငျအဖှဲ့မှ လာသညျဆိုလြှငျပငျ ၎င်းငျးတို့အား မိမိက SIC သငျတနျးပေးခွငျးမှာ မှားယှငျးသညျ့လုပျရပျမဟုတျပါ။ မိမိ၏တာဝနျတဈရပျအနနှေငျ့ လုပျပိုငျခှငျ့ ရှိပါသညျ။
Posted by အေးငြိမ်း at 12:16 PM